Iji GarageBand Normalization iji dozie ntinye ọdịyo gị dị ala | Martech Zone
Iji GarageBand Normalization iji dozie ntinye ọdịyo gị dị ala
Anyị emeela ihe dị ịtụnanya Podcast studio na Indianapolis ya na igwe eji igwe oyuyo mara mma na igwe ihe eji eme ihe eji eme ihe. Anaghị m arụ ọrụ ọ bụla pụrụ iche, agbanyeghị. Naanị m na-eweta mmepụta igwekota ozugbo n'ime Garageband ebe m na-edekọ ntinye ntinye ọ bụla na egwu nke onwe.
Ma, ọbụlagodi na m na ihe nrụpụta m site na USB kachasị, ọdịyo anaghị abịa na olu dị mma. N'ime Garageband enwere m ike ịbawanye ụba nke egwu ọ bụla, mana enweghị m ohere iji dozie nke ọ bụla n'ime ibe m na usoro mmezigharị m.
Nke a bụ ihe ọdịyo dị ka mgbe edere ya. Pụrụ ịhụ na oké ọdịiche dị n'etiti abụọ ọdịyo egwu elu na anyị professionally mepụtara intros, mgbasa ozi, na outros n'okpuru. Enweghị ohere zuru ezu na ntọala iji mee mgbanwe.
Garageband nwere atụmatụ m hụrụ n'anya ma kpọọ asị - normalisation. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ịchịkwa olu mpịakọta nke pọdkastị gị site na iji Garageband, ị ga-akpọ ya asị. Normalization weghaara na mbupụ ma mezie mpịakọta gị ebuli (ajuju) maka playback.
Na nke dị n'elu, agbanyeghị, anyị nwere ike iji mmezi mee ka ọ dị anyị mma. Ọ bụrụ na ị kpuchie niile mana otu egwu, bupụ egwu nke ọ bụla (ọfụma ka ị ghara ida ogo dị ka nke mp3) ma mee nke ahụ maka egwu ọ bụla, a ga-emezue ha na mbupụ. Mgbe ahụ ị nwere ike ihichapụ gị audio n'ime onye ọ bụla track gị oru ngo, na re-mbubata na outputted, normalized ọdịyo faịlụ.
Nke a bụ nsonaazụ:
Ugbu a lee anya na ọdịyo na nke ọ bụla n'ime olu olu ya (nke mbụ). Ugbu a ha dakọtara olu nke ibe ha ma enwere ike ịhazigharị ya n'ụzọ dị mfe na ntanetị, mgbasa ozi, outros na ibe ha. Olileanya na nke a na-enyere gị aka dị ka ọ nyeere m aka! Ọ bụrụ na ị nwere ụzọ ndị ọzọ iji nyere aka na okwu a, mee ka m mara.
Tags: azuaudioegwu ọdịyoebe ndọba ụgbọalaGarageband normalizationmicrophonesmp3normalisationtracks
Etu esi etinye Google Tag Manager na Universal Analytics
Ọ bụrụ na naanị na e nwere ụzọ “normailze” tracks tupu ebupụ. O yiri ka ọ bụ nzọụkwụ ọzọ na-enweghị isi.
Ekwenyere m kpamkpam, Bram. N'iburu ewu ewu nke pọdkastị na eziokwu na ịnwere ike ịhazigharị mpịakọta karịrị oke Garageband, ọ na-ewute ha na ha anaghị enye gị njikwa. N'oge na-adịbeghị anya, anyị malitere iji ya Auphonic ịmụta nnabata faịlụ. Ọ bụghị ọnụ, ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu.